युएनडिपीमा ४२ पदको लागि जागिर खुल्यो (विज्ञापनसहित) | Sagarmatha TVSagarmatha TV युएनडिपीमा ४२ पदको लागि जागिर खुल्यो (विज्ञापनसहित) | Sagarmatha TV
युएनडिपीमा ४२ पदको लागि जागिर खुल्यो (विज्ञापनसहित)
काठमाडौँ । के तपाई नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ ? के तपाई संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको मर्मबाट उत्प्रेरित हुनुहुन्छ, समावेशी समुहमा काम गर्न रुचाउनुहुन्छ, केहि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ र मानवताको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तरहरु हो भने, युएनडिपी नेपाल दक्ष, गतिशिल व्यक्तिहरुको खोजीमा छ, जो यो विश्वलाई अझ सुन्दर बनाउनका लागि कटिबद्ध छन् ।
नेपाली नागरिकहरुको लागि युएनडिपीले ४२ पदमा जागिर खुलाएको छ । यदि तलका कुनै पनि पदपुर्तिबारे तपाईलाई चासो छ र तपाईले पदका लागि चाहिने योग्यताहरु पुरा गर्नुहुन्छ भने, आवेदन दिन युएनडिपीले आवश्यक्ताको सम्बन्धि विज्ञापन प्रकाशन गरेर आव्हान गरेको छ ।
युएनडिपीको सबै तहमा कर्मचारीहरु संरचनामा लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने नीति रहेको छ । योग्यता पुगेका महिला उम्मेदवरा तथा पिछाडिएका र सामाजिक बहिष्करणमा परेका समुहका उम्मेदवरालाई आवेदन दिनका लागि विशेष युएनडिपीले प्रोत्साहित गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।